Ko Copernicus kana Aristotle Ari Kumhanyisa Bhizinesi Rako Here? | Martech Zone
Copernicus kana Aristotle Ari Kumhanyisa Bhizinesi Rako Here?
Chitatu, December 30, 2009 Mugovera, Mbudzi 28, 2015 Douglas Karr
Kune mabhizinesi akati wandei andinoshanda nawo… uye ndinofunga iwo andinonakidzwa nawo zvakanyanya ndiwo anoziva kuti haana kukosha sezvakaita vatengi vavo. Vamwe vevamwe havatombo bvuma kuti kune mutengi.
Copernicus ave achizivikanwa sababa veazvino ezve nyeredzi kubvira paakakakavara heliocentrism pamusoro peiyo geocentrism. Mune mamwe mazwi, zuva raive pakati pesisitimu yedu yemapuraneti, kwete Pasi. Izvo zvaive zvinomhura uye aive achipokana nechero tsika yenyanzvi yaive yakabatana nechitendero panguva iyoyo. Asi aitaura chokwadi.
Kana iwe uchida kugadzirisa zvakavanzika zvebhizinesi rako 'zvakasikwa, unogona kuda kuzvibvunza mimwe mibvunzo kutanga nezve kuti bhizinesi rako riri kufambiswa sei. Kusaziva mutengi wako sepakati pebhizinesi rako uye zvakanyanya kukosha kupfuura chero munhu arimo kunotungamira mukushandurwa kwevashandi, mutero wevatengi, uye zvinogona kupedzisira zvaendesa kune rako bhizinesi 'kufa.
Results Tiri kuita sei? Vatengi vedu vari kuita sei?
Usage Vari kuishandisa zvisizvo. Tingaita sei izvozvo?
mutengo Tinofanira kubhadharisa zvimwe. Ndeipi kukosha kwezvigadzirwa zvedu kana masevhisi kune vatengi vedu?
Kuchengeta Makatisiirei? Tiri kuita zvese zvinodiwa kukuchengetedza iwe?
Partners Chii chavakatiitira? Chii chatingaite kuti tivimbise kubudirira kwavo?
vashandi Vakanga vasina kukodzera. Vashandi vedu vanoita kuti tibudirire.
bhajeti Wana tendero. Iwe unozozvidavirira.
Marketing Zvimwe zvinotungamira. Ziva tarisiro dzatinogona kubatsira.
Tungamira Unhu Vakaita kiredhiti kadhi yavo? Tichavaita vabudirire?
Mushandi Kuchinjika Rinotii bhuku rekushandisa? Tinogona sei kukurudzira nekuvandudza kugadzirwa?
nzira Kwete kushanda… imwe Re-org! Vatungamiriri vedu vanopa yavo yemakore mashanu chirongwa.
Features Ivo vakatiteedzera! Chii chatiri kushanda pane chinotevera?
Public Relations Tora pfungwa. Wana rudo.
Zvemagariro Engagement Ita kuti ivhare zvese! Kurudzira vashandi kuti vaite!
Uri rudzii rwekambani iwe? Mumazuva ano enhau enhau, zviri nyore kutaura. Kana pfungwa yako yemagariro enhau ichidhonzera meseji yako kune vatengi vako, iwe unogona kunge uchitungamirirwa naAristotle. Kana yako meseji iri kuzivisa kubudirira kwevatengi vako, uri kumhanya naCopernicus. Zvakatora pasi rese makore mazana masere nemazana masere kuti uzvizive… ndinovimba hazvitore bhizimusi rako sekureba.
KUSA KUTI KUTI Uite Gore Idzva Zvisarudzo zviri Kushanda
Ichi chikamu makumi mashanu kubva muzana cheGreat Application
Dec 30, 2009 pa 7: 29 AM
Kuenzanisa kwakangwara, Doug. Achiwedzera kuenzanisa, Henry Ford akatanga saCopernicus uye akazove Aristotle kwechinguva, uye akazopedzisira amanikidzwa kudzokera kuchokwadi cheCopernican bhizinesi rese. Kusiyana nezana ramakore rechigumi nemana, avo vanotevera nzira isiri yevatengi-yebhizimusi havawani tarred & minhenga nekuda kwezvavanotenda. Ivo vanodzikira kana kumhan'arirwa.